नेपालमा कोरोना : कुन जिल्लामा कति संक्रमित ? (सूचिसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
NAGARIKKHABAR TV २०७७ साल श्रावण २९ गते, बिहीबार
२०७७ साल श्रावण २९ गते, बिहीबार
बैंकका सङ्क्रमित कर्मचारीलाई यस्ताे व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन
access_time18 minutes ago
कोरोना संक्रमित शिक्षकको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार थालियो
बिहारमा एकै दिनमा करिब चार हजार काेराेना सङ्क्रमित
प्रधानमन्त्रीको ओलीको अभिव्यक्तिसँग नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको प्रस्ताव कसरी मिल्यो ?
चितवनमा ठेला र साइकलमा व्यापार गर्न नपाइने
फुटबल खेलाडीसहित ५३ जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ
जुवा खालमा प्रहरीको छापा, १७ जना पक्राउ
वीरेन्द्रनगरमा भदौ १ गतेदेखि निषेधाज्ञा, उपभोग्य बस्तु मौज्दातमा राख्न आग्रह
भारतीय वायुसेनाले आपत्ति जनाए पनि रिलिज भयो फिल्म
नरेन्द्र मोदी भारतको चौथो सबैभन्दा लामो सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका इञ्चार्जलाई सम्मान
नेकपा विवाद समाधान उन्मुख : यो हो सहमतिको खाका !
रुसी कोरोना भ्याक्सिन : जम्मा ३८ जनामा परीक्षण, साइड इफेक्ट ज्यादा भएको दावी
कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिनमा संसारभर भरोसा किन छैन ? यी हुन् मुख्य ६ कारण
रुसमा तयार भएको कोरोना भ्याक्सिन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत
गोंगबु हत्या प्रकरणमा महिलाको बयान : 'नशालु पदार्थ खुवाएर हत्या गरेँ, शव फाल्न छोरीले सहयोग गरिन्'
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'अबको पाँच दिनमा नेकपामा सिनारियो फेरिन्छ' (भिडियोसहित)
कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिनको माग ह्वात्तै बढ्यो, बर्षमा ५० करोड डोज तयार पारिने
नेपाल-भारतबीच भदौ १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय वार्ता : सीमा विवाद मुख्य एजेण्डा
चीनले जारी गर्‍याे अलर्ट : फ्रोजन सिफुडको प्याकेटमा कोरोना भाइरस फेला, अनुसन्धान जारी
गोंगबु हत्या प्रकरण : फेसबुकमार्फत चिनाजानी, हत्याको मुख्य कारण यौन शोषण
नेपालमा कोरोनाबाट एकैदिनमा ८ जनाको मृत्यु : ज्यान गुमाउनेको संख्या ९१ पुग्यो
नेपालमा ८८ जना कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर : ८५ जना आइसियुमा, ३ जना भेन्टिलेटरमा
नेपालमा कोरोना : कुन जिल्लामा कति संक्रमित ? (सूचिसहित)
access_time२०७७ साल श्रावण १७ गते, शनिबार ०३:४१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​ कोरोना अपडेट
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) काे संक्रमण निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । नयाँ संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या पनि थपिने क्रममा रहको छ ।
नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि आवागमनमा सहज हुँदै गर्दा कोरोना संक्रमितहरुको संख्यामा पनि त्यसरी नै वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले सम्म १९ हजार ७ सय ७१ जना पुगेका छन् ।
देशभर अहिलेसम्म ५६ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये ५ हजार ३ सय १६ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । उनीहरुको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा अहिले २ सय २२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । प्रदेश १ मा अहिलेसम्म १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला रहेका छन् ।
इलाममा १२, उदयपुरमा १२, ओखलढुङ्गामा १०, खोटाङमा १, झापामा ५१, ताप्लेजुङमा ८, तेह्रथुममा २, धनकुटामा ४, पाँचथरमा १, मोरङमा ९८, सुनसरीमा २० र सोलुखुम्बुमा ३ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश एकका २ वटा जिल्ला भोजपुर र संखुवासभा कोरोना मुक्त रहेका छन् । अहिलेसम्म जम्मा संक्रमित १ हजार ५४ जना रहेका छन् । भने ८ सय ३१ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कारोना संक्रमित र मृत्यु भएका छन् । प्रदेश २ मा अहिले २ हजार ३४ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । भने १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये धनुषामा ९३, पर्सामा २ सय ५९, बारामा ८७, महोत्तरीमा ४ सय ९३, रौतहटमा ७ सय ६५, सप्तरीमा १ सय ३१, सर्लाहीमा १ सय ४६, र सिराहमा ६० जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
प्रदेश २ मा जम्मा संक्रमित ५ हजार १ सय ५४ रहेका छन् । यसमध्ये ३ हजार १ सय १ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
यता देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा ५ सय ७२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । १० जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा ३ सय १५, चितवनमा ४३, दोलखामा १ र धादिङमा २५ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै नुवाकोटमा १८, भक्तपुरमा २७, मकवानपुरमा २४, रामेछापमा १८, ललितपुरमा ६५, सिन्धुपाल्चोकमा ३२ र सिन्धुलीमा ४ जना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन् । रसुवा र काभ्रे जिल्ला कोरोना मुक्त रहेको छ । अहिलेसम्म जम्मा १ हजार १ सय ८ जना संक्रमित भएको प्रदेशमा ५ सय २६ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ३ सय २४ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ५ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । कास्कीमा ३८, गोरखामा २५, तनहुमा २५, नवलपरासी पुर्वमा ६२, पर्वतमा ८, म्याग्दीमा ८, लमजुङमा ४३, वाग्लुङमा ३२, स्याङ्जामा ८३ जना सक्रिय संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन् ।
यस्तै ११ वटा जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङ संक्रमण मुक्त रहेका छन् । यो प्रदेशमा अहिले सम्म १ हजार ५ सय ७३ जना संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये १ हजार २ सय ४४ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ५ मा ४ सय ३० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश ५ मा १० जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । अर्घाखाचीमा २४, कपिलवस्तुमा ६०, गुल्मीमा १९, दाङमा १ सय ३८ र नवलपरासीमा ४९ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै पाल्पामा ११, प्युठानमा ७, बर्दियामा ३१, बाँकेमा २९, रुकुम पुर्वमा ४, रुपन्देहीमा ३६ र रोल्पामा २२ जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । अहिलेसम्म यो प्रदेशमा ४ हजार ३ सय ६६ जना संक्रमित रहेका छन् । भने ३ हजार ९ सय ७१ जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा २ सय ९६ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । अहिलेसम्म ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कालिकोटमा १९, जाजरकोटमा १५, जुमलामा ३, डोल्पामा २ र दैलेखमा १ सय ३८ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ९, सल्यानमा ७३, सुर्खेत २८, हुम्ला २ जनाले उपचार गराइरहेका छन् । अहिलेसम्म कर्णालीमा कुल २ हजार १८ जना संक्रमित भएका छन् । भने १ हजार ७ सय १८ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ४ सय ८३ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । अहिलेसम्म ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अछाममा १ सय ३६, कञ्चनपुरमा ६२, कैलालीमा ५ सय ५ र डडेलधुरामा ४२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यस्तै डोटीमा २ सय ९, दार्चुलामा २५, बझाङमा १ सय १९, बजुरामा ३ सय ६५, बैतडीमा २० जनाले उपचार गराइरहेका छन् । अहिलेसम्म यो प्रदेशमा ४ हजार ४ सय ९८ कुल संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ३ हजार ८ रहेको छ ।
काेराेना राेकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यकाका जिल्लाहरूमा अनुगमन टोली
स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई कोरोना संक्रमणपछि रामेछापको मन्थली नगरपालिका 'सिल'
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई कोरोना संक्रमण
नेपालमा कोरोना संक्रमणसँगै मृत्युको ग्राफ बढ्दो
बाँकेका थप २२ जनामा कारोना संक्रमण (सूचीसहित)
पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाबाट ४ जनाको मृत्यु : ज्यान गुमाउनेको संख्या ९५ पुग्यो
विवादित 'स्ट्रिप नक्सा'का कारण नेपाली जमीनमा भारतीय कब्जा
रुबेन अवालेको ‘तिमी बिना’ सार्वजनिक (भिडियो)
बाँदरलाई गिफ्ट मिल्यो पानीको बोतल : प्रयोग गर्नुपहिले मानिसले जस्तै हेर्‍याे 'मेनुअल बुक' (भिडियोसहित)
कोरोना नियन्त्रणका लागि उपत्यका भित्रने सबै नाका 'सिल' गर्नुपर्छ : मेयर शाक्य (भिडियो)